192.168.8.100 - Admin Pinda - Username uye nePassword
192.168.8.100 iri Yega IP Kero yekushandisa chete mukati meiyo Inosarudzika Network. Iri kero rinoshandiswa nema modem, ma routers, uye nezvimwe zvisingaverengeke zvigadzirwa. Uri kuyedza kutora iyo login yeiyo router? Iwe uri munzvimbo chaiyo.
Kero ye IP yega yega yakapihwa kune gadget mukati yakavharwa network & haina kuwanikwa zvakasununguka kutsvaga paInternet. Kuita kuti zvive nyore kupararira kwema IP kero mukati memasangano & network, kero dzemunhu dzakaumbwa. Izvo zviri nyore kuziva yako wega IP kero nekujekesa iyo chaiyo mamiriro.
Router Admin PWs ye 192.168.8.100 & 192.168.8.100 Login IP ndeye IP kero uko ma routers akadai seLysys & more network inoshandisa semasuo kana nzvimbo dzekuwana. Masangano anovaka router admin kupinda mukero kuti varegedze maneja maneja aronge maratidziro avo pamwe nema routers. Kunyanya mumwe anogona kubata Ekuchengetedza Mikana, DNS, proxy, IP QoS, LAN, WLAN marongero, Network Management, DSLMAC, ADSL, WAN, WPS block; pakati pevamwe.
Nzira yekupinda nyore nyore kune 192.168.8.100?
Through 192.168.8.100 IP kero inowana yako Router Admin iyo inogona kurega iwe kuti uongorore kumisikidza & marongero ayo iyo software software inopa.
Click on 192.168.8.100 kana kunyora 192.168.8.100 mune kero bar yebrowser yako.
Kana izvi zvikasabudirira, saka 192.168.8.100 haisi yako IP kero ye router. Mushure mekuona kero ye IP ye router, iise mu URL yako browser Kero. Iwe unoendeswa kune yekunyorera pani yemushandisi. Pano tarisa yako router mushandisi & PW.
Ukasarangarira zita rako rekushandisa & PW unongoteerera iyi mirairo kuti uwanezve. Kana usati wagadzirisa iyo default PWs & mushandisi iyo inoratidzika neiri router iwe unofanirwa kureva kune iyo router default mapassword & mazita evashandisi. Mushure mekuti iwe uri mune admin mapaneru ema routers iwe unozogona kugadzirisa & nekuchinja kwese internet marongero.
Kana iwe uri kutarisana nematambudziko kudzoreredza yako router pa 192.168.8.100 (isiri kurodha kana kuwedzerwa kurodha), iwo ma network anogona kunge ari kutora kero nyowani yemufananidzo 10.0.0.1, 192.168.2.1, 192.168.0.1. Mumamiriro ezvinhu akadaro tarisa kero rondedzero ye router IP.
Kana iwe uine yako network yepamusha uye uine smart phone, desktop desktop, piritsi uye laptop. Kuburikidza nepakati router izvi zvigadzirwa zvese zvinobatana neinternet. Panzvimbo yechigadziro chakaparadzaniswa netiweki chakagoverwa neruzhinji IP kero, iyo yakapihwa veruzhinji IP Address iyo iwe yauchazoshandisa yakapihwa kune iyo router.
A router inogona kupihwa yeruzhinji IP kero, zvisinei inozogovera yakasarudzika kero ine iyo DHCP protocol kune zvese zvishandiso pane network. Iwo magajeti padandemutande achange achifambidzana vachishandisa yavo yega IP kero, & iyo router ingangoshandisa yeruzhinji IP kero kurerutsa kudyidzana pane internet. Paunenge uchibatanidza kune internet, yako wega IP kero inogara yakavanzika, uye ingori yeruzhinji IP kero yeirauta inoonekwa.
For 192.168.8.100 IP yekutsvaga chiratidzo iPC inogadzirwa. Iyo Hardware Internet Protocol Kero inoona yakaringana kududzirwa kweiyo IPv4 Internet Protocol Kero.